AUKEY သည် Dynamic Detect ဖြင့် Charger အသစ်ငါးခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
AUKEY သည်မိုဘိုင်းနှင့်လက်တော့များအတွက် smart charger ၅ ခုကိုပေးသည်
Eder Esteban | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 23/09/2019 11:24 | ပစ္စည်းများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
AUKEY သည်ဘက်ထရီ (သို့) အားသွင်းစက်တွင်အကျော်ကြားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့တွင်ကျယ်ပြန့်သောအားသွင်းစက်များရှိပြီးပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်အားသွင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ယခုအခါတွင်ကုမ္ပဏီသည်မိုဘိုင်း (သို့) လက်တော့ပ်များတွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည့်စမတ်အားသွင်းစက်အသစ်အသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ယခု AUKEY အကွာအဝေးတွင် charger အသစ်ငါးလုံးပါ ၀ င်သည်။ သူတို့အားလုံး Dynamic Detect နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။ ၎င်းကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ချိတ်ဆက်ထားသောစက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုရှိပါက charger ၏စွမ်းအားကိုနှစ်ခုကြားမျှဝေခွင့်ပြုသည့်အခါ၎င်းကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုထိရောက်သောအားသွင်းမှုကိုရရှိသည်။
1 AUKEY USB C သည် Charger ကို Dynamic Detect ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်
2 AUKEY USB C Charger သည်စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေမှု 3.0 နှင့် Dynamic Detect ပါရှိသည်
4 GAN နှင့်အတူ AUKEY USB C Charger
AUKEY USB C သည် Charger ကို Dynamic Detect ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်
ပထမဆုံးပုံစံကတော့ဒီအမှတ်တံဆိပ် charger ပါ။ ကြောင်း 30W တစ်ဝန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ၎င်းသည်သဟဇာတဖြစ်သောဖုန်းများသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့များနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီအားသွင်းစနစ်ပါ USB-C နှင့် USB ကိရိယာများကိုအားသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ပုံမှန် USB နှင့် Power Delivery 3.0 output နှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် port နှစ်ခုကိုတချိန်တည်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပင် device အား 18W စွမ်းအင်ဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, မြန်ဆန်ထိရောက်သောအားသွင်းခံစားရန်ဖြစ်နိုင်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စျေးကွက်ရှိကြီးမားသောလက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒီ AUKEY charger သည် ပါးလွှာသော၊, ငါတို့အိမ်မှာသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်မရွေးအားလပ်ရက်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူယူနိုင်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်
ဒီ AUKEY charger ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် 30,99 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာဝယ်ပါ Amazon ပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
AUKEY USB C Charger သည်စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေမှု 3.0 နှင့် Dynamic Detect ပါရှိသည်
ဒုတိယ charger သည်ယခင် model နှင့်ဆင်တူသည်။ ဤကိစ္စတွင်၌ရှိသည် နှစ်ခု USB-C ကိုဆိပ်ကမ်းများဖုန်းများကဲ့သို့သောကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုအားသွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည် Android model မှ iPhone model များအထိကြီးမားသောဖုန်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒီအားသွင်းစက်က 36W ကိုပေးပါတယ်။
အတူတူကျေးဇူးတင်ပါတယ် တစ်ချိန်တည်းမှာဖုန်းနှစ်ခုကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်ဤအမှု၌ပါဝါ 18W စေမည်ဖြစ်သော။ ၎င်းသည်ဖုန်းကိုအလွန်လျင်မြန်စွာအားသွင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်။ အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိသဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်စေ၊ ခရီးသွားခြင်းဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအမြဲတမ်းယူနိုင်သည်။ ဤကိစ်စတှငျအလွန်အဆင်ပြေ။
ဒီမော်ဒယ် AUKEY charger အသစ်များ၏ပုံစံ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
AUKEY မှဤအကွာအဝေးသစ်တွင်တတိယအားသွင်းခြင်း အစွမ်းထက်သည် USB အားသွင်း ၎င်းသည် standard USB နှင့် Power Delivery 3.0 output နှင့်အတူပါရှိပြီး USB-C နှင့် USB ထုတ်ကုန်များကိုထိရောက်သောနည်းဖြင့်အားသွင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီ charger ကိုအသုံးပြုပြီး 60W အားသွင်းနိုင်ပြီး USB-C port မှာအချိန်တိုင်းအသုံးပြုနိုင်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Device နှစ်ခုအားအားသွင်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည် ports နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းအသုံးပြုလျှင် 45W Power Delivery ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပေါ့ပါးသည်။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ဤအကွာအဝေးအတွင်းမြင်နေနေကြသည်အဖြစ်။ ငါတို့နဲ့အတူနေချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအဲဒါကိုအမြဲတမ်းသိမ်းထားတတ်တယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ charger ကို ၎င်းတွင်ပိုမိုအသုံး ၀ င ်၍ သယ်ဆောင်နိုင်သောခေါက် connector တစ်ခုရှိသည်။ အိမ်၌သော်လည်းကောင်း၊ ရုံး၌သော်လည်းကောင်း၊ သွားစဉ်တွင်အားသွင်းခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သည်။
ငါတို့ကို Amazon မှာဝယ်လို့ရပြီ၊ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။, 49,99 ယူရိုစျေးနှုန်းမှာ။
GAN နှင့်အတူ AUKEY USB C Charger
ဒီ AUKEY ၏အကွာအဝေးအတွင်းစတုတ္ထအားသွင်းစက်ကိုအသုံးပြုသည် la အဆင့်မြင့် GaN နည်းပညာ။ ဤနည်းပညာသည်အလွန်မြန်သောအားသွင်းမှုကိုရရှိစေသည်။ ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အများအပြားမော်ဒယ်များနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် MacBook Pro, iPhone XS, XS Max, XR, Nintendo Switch သို့မဟုတ်အခြား USB-C နှင့်ကိုက်ညီသောကိရိယာများ။
ဒီအားသွင်းစက်က 60W ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းနိုင်ပေမယ့်ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းနိုင်စေတယ်။ အချိန်တိုင်းတွင်အလွန်ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သငျသညျကိုကျောပိုးအိတ်၊ အိတ်၊ ထို့အပြင်၎င်းကိုထုတ်ကုန်များအနေဖြင့်လက်ရှိလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်အားသွင်းနေစဉ်အတွင်းအပူလွန်ကဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပုံစံပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းကများပါတယ် 42,99 ယူရို၏စျေးနှုန်း။ အမေဇုန်တွင်ခေတ္တ ၀ ယ်ယူနိုင်သော်လည်း ၃၄.၉၉ ယူရိုသာရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
ဒီပဉ္စမအားသွင်းစက်သည်ဖြစ်နိုင်သည် AUKEY မှဤအကွာအဝေးအတွင်းထိပ်တန်းမော်ဒယ်။ ၎င်းသည်အားသွင်းကြိုးဖြစ်ပြီး 60W စွမ်းအားရှိပြီး USB-C port နှစ်ခုလည်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဖုန်းတွေလားလက်တော့ပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အားသာချက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟာ laptop တစ်လုံးနဲ့ဖုန်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအားသွင်းနိုင်ပေမယ့်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနှေးကွေးစေခြင်းမရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း ကျနော်တို့ဒီအကွာအဝေးအတွင်းမြင်နေဖြစ်ကြောင်းသောအထဲတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူကခရီးစဉ်တလျှောက်သွားတဲ့အခါအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်တင်ဆက်ထားတယ်။ အလင်းသည်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအစွမ်းထက်သည်။ အလွန်အန္တရာယ်ကင်းစွာဖြစ်ခြင်းအပြင်အပူလွန်ကဲခြင်းသို့မဟုတ်ပိုလျှံသော current ကိုရှောင်ရှားခြင်း။
ဒီအားသွင်းအားသွင်း ယူရို ၅၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည် Amazon ပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ပစ္စည်းများ » AUKEY သည်မိုဘိုင်းနှင့်လက်တော့များအတွက် smart charger ၅ ခုကိုပေးသည်